Akasekho emsakazweni wodumo u‘Legend lady’ | News24
Akasekho emsakazweni wodumo u‘Legend lady’
ISITHOmbe: sithunyelwe U-legend Lady
OBESAKAZA emsakazweni wentsha iUgu Youth Radio uThabile Msane odume ngelika Legend Lady akasezukuzwakala emoyeni.
UMsane uthe uthanda ukwazisa abalaleli bakhe ukuthi useyekile ukusakaza kulomsakazo emva kokuba emiswe ngokukhulu ukuzuma.
Uthe izizathu azinikiwe ngokumiswa kwakhe azimgculisanga.
“Ngithathe isinqumo sokuthi ngesule emsakazweni iUgu Youth Radio emva kokuthi umphathi siteshi uSiyabonga Mkhungo engitshele ukuthi ake ngihlale ekhaya okwesikhashana,” kusho uMsane.
Lomsakazi wodumo obezwakala njalo ngesonto uthe izizathu zokuthi amiswe ziholele ekutheni abone kungcono avele aqoqe okungokwakhe abambe afika ngayo.
“UMkhungo wangitshela ukuthi inkontileka yami izovuselelwa ngabo Okthoba, waphinda wathi bazongibiza uma bengidinga. Lokho akungithokozisanga,” kusho uMsane.
Ethintwa uSiyabonga Mkhungo wesiteshi uthe akazange axoshwe uMsane kodwa uyena okhethe ukuziyekela.
“Thina la eUgu Youth Radio asiqashi ngokugcwele kepha siqeqesha intsha emsakazweni ukuze iphume isinolwazi ngokusakaza. Kanjalo ke uMsane naye ubesehlale nathi imnyaka emibili kwashaya isikhathi sokuthi senze ushinsho ezinhlweni zethu, yingakho sithe akame kancane, asimxoshanga,” kusho uMkhungo.
UMkhungo uvumile ukuthi bebesazombiza uMsane kepha kwaba uyena othi uyahamba.
ULegend Lady uthe uthanda ukwazisa abalandeli bakhe ukuthi uzobuyela emsakazweni kungekudala kepha angeke kusaba yiUgu Youth Radio.
“Ngikhombise ukuzimisela okukhulu kulomsakazo kodwa-ke ngizoqhubekela phambili nekhono lami. Ngithanda ukuthi abalandeli bami baqhubeke ukungilandela ezinkundleni zokuxhumana (social networks) khona bezoba nolwazi ukuthi kwenzekalani. KuFacebook Thabile Legend Lady Msane kanti ku-Instagram Thabile Majola.”